Åtgärder näringslivet somaliska - Malmö stad
Åtgärder näringslivet somaliska
Waxeynu halkan ku ururiney warbixin ku saabsan gargaarka aan siin karno shirkadaha iyo wax qabadka aynu fulinno si hoos loogu dhigo saameynta xun ee soo gaari karta wax soo saarka iyo ganacsiga. Maadaama xaaladdu dhaqso isu beddeli karto waxeynu kugula talineynaa inaad mar kasta warbixintii ugu danbeysay kala socoto bogagga internet-ka ee hey’adaha.
Malmö business ayaad ka heleysaa warbixin iyo linkiyada hey’adaha, ururada wada shaqeynta iyo meelaha kale aad ka heleyso warbixin saxa.
Hagidda shirkadaha ee magaalada Malmö ayaa sii xoojiyey tala siintiisa
Waxeynu xoojiney hagidda shirkadaha waxadna naga heli kartaa talo siin iyo warbixin si lagaaga caawiyo howlaha waxqabadka ee ay magaalada Malmö siiso milkiilayaasha shirkada. Waxaad kalood naga heleysaa warbixintii ugu danbeysay ee gargaarka qaran iyo fursadaha kalee jira.
Tala siinta aan xoojiney waxaad kala xiriiri kartaa telefoonka 040-34 10 00 iyo emaylka foretagslots@malmo.se. Hagidda shirkadaha ayaa furan maalmaha shaqada inta u dhaxeysa saacadaha 08.00–17.00.
Waxqabadka ay magaalada Malmö ugu tala gashay wax soo saarka iyo ganacsiga
Hoos u dhig waqtiga lacag bixinta shirkadahay magaalada Malmö wax ka iibsato + –
Meheradaha magaalada Malmö ayaa laguu guubaabinayaa iney bixiyaan qaan-sheegadka shirkadaha wax ka iibiyey taariikh ka horeysa tan ay shirkadda wax ka iibisay ku sheegtay iney tahay maalinta ugu danbeysa ee lacagta la bixinayo iyo in qaan-sheegadka oo dhan lagu bixiyo mudo 15 maalmood gudahood. Waxaa taa ka baxsan maamulada caafimaadka, daryeelka iyo xanaanada, maadaama uu kuwaasi culeys weyni saaran yahay isla markaana ay u baahan yihiin iney xooggooda meel isugu geeyaan.
Ku meel gaar ahaan u joojin bixinta kirada, fursad qeyb qeyb u bixin lacagta iyo/ama hoos u dhig kirada + –
Magaalada Malmö ayaa u ogolaaneysa shirkadaha degmada ee guryaha kireeya iney hoos u dhigaan kirada dhismaha haddii ay goobtu tahay mid ganacsi. Fursaddaa kirada hoosta loogu dhigayo ayaa quseysa laamaha ganacsiga ee dhibaatadu asiibtay iyadoo la sameynayo qiimeyn gaar ahaaneed loona eegayo mabda’ ganacsi ku saleysan.
Meheradaha shirkadda degmada ee degaanada MKB qeybta golayaasha ganacsiga ayaa heleya fursad taa la mida ee hoos u dhig kiro ku meel gaara.
Dhismayaasha magaalada Malmö ayaan ku kordhin doonin kirada sanadka shirkadaha ka kireystay golayaal ganacsi isla markaana bixinayo fursad ay shirkadahaasi kirada ugu bixin karaan nidaam qeyb qeyb loogu bixinayo kirada. In dib loogu dhigo bixinta kirada ayaa noqon karta qeyb ka mida qorshahaa qeyb qeyb u bixinta kirada.
Fursad wax ku iibin meel ka baxsan dukaamada iyo fursad habeyn takeaway ee meel ka baxsan maqaayadahabilaa kharash ah + –
Magaalada Malmö ayaa bixineysa fursadaha wax ku iibin meel ka baxsan dukaamada iyadoon dukaamadan aan looga baahneyn iney khidmo siiyaan degmada. Waxaa haddana meheradahaa u suura gala iney sameystaan meelo laga qaadan karo cuntadooda oo ka baxsan golaha maqaayadooda. Waa in la raacaa sharciga jira dhanka maareynta cuntada.
Wali waxa loo baahan yahay ogolaasho boliis.
Dib u dhigga khidmada meelaha dibedda wax laga cuno ilaa iyo agoosto + –
Magaalada Malmö ayaa dib u dhigeysa khidmada ogolaanshaha horey u jirey ee meelaha cuntada iyo cabitaanka dibedda iyo iibinta boos dhul dadweyne. Dib u dhigaa ayaa shaqeynaya 6 bilood laga bilaabo maarso 2020.
Dheereyn waqtiga la bixiyo qarashka biyaha, kan wasaqda bulaacadaha iyo maareynta qashinka + –
Magaalada Malmö ayaa ka shaqeyneysa sidii shirkadaha codsada dib u dhigista in loo ogolaado codsigaa khuseeya qarashka biyaha, kan wasaqda bulaacadaha iyo maareynta qashinka.
Dheereyn waqtiga la bixiyo qarashka la xiriira ogolaanshaha iyo baaritaanka + –
Magaalada Malmö ayaa waqtiga u kordhineysa khidmooyinka qaar kuwaasoo la xiriira meheradaha magaalada ee ogolaanshaha iyo baaritaanka. Waxanu muujineynaa dhego nuglaan iyo kordhinta waqti dheereynta howlaha ogolaanshaha iyo baaritaanka inti macquul ah.
Sugid wada shaqeyn iyo in Malmö tahay goob booqasho + –
Destinationssamverkan Malmö ayaa ah wada shaqeynta magaalada Malmö iyo 60-meeyo ka howl-gala ganacsiga booqashada. Howlahaa ayaa waxa lagu maal geliyaa khidmada ay bixiyaan xubnaha. Magaalada ayaa sanadka 2020 kordhineysa dhaqaalaha ay ku bixiso howlaha ganacsiga booqashada, si looga maarmo khidmada ay xubnuhu ku bixin jireen Destinationssamverkan. Ujeedaduna waa sidii loo taageeri lahaa laan ganacsi ee dhibaatada weyni soo gaartay.
Sugid wada shaqeyn ee Malmö city + –
Citysamverkan waa shirkad aan faa’iido laga dooneyn oo ay wada leeyihiin magaalada, wax soo saarka iyo ganacsiga iyo milkiilayaasha hantiga maguurtada ah. Degmada ayaa dhaqaale ugu deeqeysa si xubnuhu uga maarmaan iney bixiyaan khidmada xubinimada ee sanadka 2020 qeybtiisa labaad.